Miomana Hanao Diabe Hanohitra Ny Fahantrana Ao Skopje Ny Makedoniana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Marsa 2014 0:44 GMT
Vakio amin'ny teny Español, македонски, বাংলা, English
Iray amin'ireo firenena mahantra indrindra ao Eoropa i Makedonia, ka mponina tombanana eo amin'ny 30 isan-jato eo no miaina ao anaty fahantrana ary olona mitovy isan-jato amin'izany ihany koa no tsy manana anton-draharaha. Nokilasiana ho firenena fadiranovana indrindra manerantany mihitsy aza ny firenena araka ny Fanadihadiana 2012 momba ny fahantrana navoakan'ny The Economist, izay mandahatra ny firenena amin'ny tahan'ny tsy fananan'asa sy ny tahan'ny fidangan'ny vidim-pianana.
Nokarakaraina sy nanaovana fanentanana tamin'ny pejy Facebook sy bilaogy ny diabe tamin'ny fampitondrana anarana mitovy izany, ary koa tamin'ny fampiasana diezy #5до12 sy #5do12 tao amin'ny Twitter. Hofaranana amin'ny fampisehoana an-kalamanjana antsoina hoe Fampisehoana Hoan'ny Fahamendrehana izany.
Manazava [mk] ny hevitr'izy ireo ao amin'ny habakany ofisialy ireo mpikarakara ny diabe:
Talohan'ny diabe, nanao fikarohana [mk] mifantoka amin'ireo vondrona mpandinika sy ireo mpikarakara ny adihevitra misokatra hoan'ny daholobe mba hanangonan-kevitra sy vaovao avy amin'ny olona ny mpikarakara. Miezaka mafy mba hahazo fanohanana avy amin'ny daholobe izy ireo mba hahafahany mitondra fanovana amin'ny Lalàna momba ny fiarovana ara-tsosialy sy adihevitra eo anivon'ny Parlemanta mba hahazoana karama farany ambany indrindra mendrika sy sahaza hoan'ny rehetra.
Natao kopia sy nadika teto ambanin'ny lahatsarin'ny [mk] ny resak'olo-tokana eto ambony :
9 ora izayBelarosia